२०७६ साल चैत २३ गते आइतवार हेर्नुस् आजको राशिफल – newslinesnepal
२०७६ साल चैत २३ गते आइतवार हेर्नुस् आजको राशिफल
प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७६, आईतवार ०५:४२
वि.सं. २०७६ चैत २३। आइतवार इ.स. २०२० अप्रिल ५। शकसंवत् १९४२ । प्रमादी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। ने.सं. ११४० चौलाथ्व। चैत्र शुक्लपक्ष। द्वादशी
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। यदि तपाईंले आज राम्रो तरीकाले आफ्नो कार्ड खेल्नुभयो भने केही अतिरिक्त नगद प्राप्त गर्नु हुनेछ। केटाकेटीलाई तपाईंको कठोर व्यवहारले तिनीहरूलाई परेशान बनाउँछ। तपाईंले आफैलाई रोक्नु पर्नेछ र यसले मात्र आफु बीच बाधा उत्पन्न गराउँछ भनेर तपाईंले याद गर्नुहोस। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
बृष – TAURUS इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो –
आज तनाउ मुक्त – शान्त रहनुहोस्। आफन्तहरूले तपाईंलाई अनपेक्षित उपहार ल्याउँछन् तर तपाईंबाट पनि केही मद्दतको आशा गर्नेछन्। व्यक्तिगत मामिलाहरू नियन्त्रणमा हुनेछन्। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। रोमान्टिक गीतहरू, खुशबूदार मोमबत्ती, राम्रो खाना, र केही पेयहरू; यो दिन आफ्नो जोडीसित यस्तै नै हुनेछ।
छोराछोरीसँग हुँदा सान्त्वना प्राप्त गर्नुहोस्। आफ्ना परिवारका मात्रै नभएर अन्य परिवारका छोराछोरीको चिकित्सकीय शक्तिले तपाईंलाई सान्त्वना दिन्छ र फिक्री पनि शान्त पार्न सक्छ। नयाँ पैसा कमाउने अवसर आकर्षक हुनेछन्। घरमा छोराछोरीले अनुपात बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न गरेर तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन् – कुनै पनि कदम चाल्नु अघि तथ्य प्रमाणित गर्नुहोस्। व्यक्तिगत निर्देशनले तपाईंको सम्बन्ध सुधार हुनेछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
ध्यानले राहत ल्याउनेछ। तपाईंले भरोसा गरेको कसैले तपाईंलाई पूर्ण सत्य नभनेको हुन सक्छ – तपाईंको अरूलाई विश्वस्त गर्ने क्षमताले आउने समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। प्रेममा सफल बनाउनको लागि कसैलाई मद्दत गर्नुहोस्। पर्यटन र यात्राले खुशी ल्याउनेछ र अत्यधिक ज्ञानवर्धक हुनेछ। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
एउटा मित्रको ज्योतिष निर्देशनले तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। तपाईंले धेरै नभेट्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्न राम्रो दिन। तपाईंको जीवन खुशी दिनाले र विगतका गल्तीका लागि क्षमा गर्नाले योग्य बनिदै जान्छ। तपाईंमध्ये कसैले टाढाको यात्रा गर्नुहुनेछ – यो धेरै व्यस्त हुनेछ – तर अत्यधिक फलदायी पनि हुनेछ। आफ्नो जीवनको प्रेम, आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई अद्भुत आश्चर्य दिन सक्छन्।
आज आफ्नो उँचो विश्वासलाई सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। व्यस्त दिन भए तापनि तपाईँले अझै पनि आफ्नो ऊर्जा फर्काएर ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। राम्रो खाना र रोमान्टिक क्षण; सबै आज तपाईंलाई प्राप्त हुनेछन्।
तपाईंले महसुस गर्ने तरीकामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आफ्ना पाहुनाहरूसँग अशिष्ट नहुनुहोस्। तपाईंको व्यवहारले आफ्नो परिवारमा समस्या मात्र होइन, सम्बन्धमा पनि शून्यताको सिर्जना गर्न सक्छ। आफ्नो साथीको अभावमा पनि उपस्थिति महसुस गर्ने सम्भावना छ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
बृश्चिक – SCORPIO तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु –
बढी खानबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो वजनमा रोक लगाउनुहोस्। रिस छोटो-पागलपन हो र यसले तपाईंलाई गराउन सक्छ भनेर तपाईंले जान्नु पर्ने समय हो तपाईँले कति सुन्दर काम गर्नुभएको छ भन्ने देखाउन आज तपाईंको प्रेम फूल्नेछ। तपाईंले आज आफ्नो जोडीसँग आफ्नो जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन बिताउनु हुनेछ।
कठिनाइ बुन्ने र तिनीहरूलाई बढाउने तपाईंको बानीले तपाईंको नैतिक फाइबर कमजोर हुन सक्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। आज सामाजिक कार्यहरुमा उपस्थित हुने मौका पाउन सक्नुहुन्छ- जसले गर्दा तपाईं प्रभावशाली मान्छेको सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। प्रियसँग क्यान्डी फ्लोस् र टफी बाँट्ने कार्डमा सम्भावना देखिन्छ। आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
मकर – CAPRICORN भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि –
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईंको रोमान्टिक साथीले तपाईंमाथि चापलूसी गर्ने कुरामा सावधान रहनुहोस् – यो संसारमा मलाई एक्लो नछोड्नुहोस्। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। तपाईंको घरेलू दृश्य केहि अप्रत्याशित हुनेछ। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। धेरै विषयहरूमा धेरै असहमति हुन सक्ने हुनाले यो दिन तपाईंको लागि धेरै राम्रो हुने छैन। यसले तपाईंको सम्बन्ध कमजोर बनाउनेछ।
मीन – PISCES दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि –
आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। आज आफ्नो प्रेमीलाई केही भावनात्मक कुरा नभन्नु होला। समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। आज सहजताको कमीले गर्दा तपाईँ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निस्सासिएको महसुस गर्न सक्नु हुन्छ। तपाईंले राम्रो बातचीत गर्नु चाहिं आवश्यक छ।